Toerana vitsy eto Madagasikara ihany anefa no hisy rotsak’orana. Orana tandrifin-drahona ny any Melaky, Menabe ary ny tapany atsimo andrefan’ny Nosy. Orana manify ny any Analanjirofo sy Antalaha ao anatin’ny efatra andro manaraka. Hisy ny oram-baratra eto Antananarivo sy amin’ny toerana maro eto Madagasikara, raha ny nohamafisin’ny foibe famantarana ny toetr’andro mandritra ireo fety ireo. Na izany aza, hidina ny maripana ary mety hilatsaka hatrany amin’ny 26 degre hatramin’ny rahampitso, hoy ny tompon’andraikitra, noho ny fahazoan’ny Alizay toerana kely indray. Ho maina tanteraka anefa ny tapany atsimo. Misy ihany koa amin’izao fotoana izao ny andro ratsy ao amin’ny fari-dranomasina avaratra atsinanan’i Madagasikara saingy tsy ahiana hatreto ny hivadihany ho rivodoza. Hitondra tafio-drivotra mafy hatrany amin’ny 60 km/ora io andro ratsy io. Hifanesy ny rotsak’orana amin’io volana janoary raha ny tombana.